Drama – Categories – Channel Myanmar
Secret Royal Inspector & Joy(2021)
Fall In Love ( 2021 ) Chen Xing Xu , Evan Lin , Zhang Jing Yi , Chen Xin Yu တို့ရဲ့ Fall In Love (2021) လေးလာပါပြီနော်၁၉၂၆ခုနှစ်မှာ မိဘတွေကွဲသွားတာကြောင့် အမေဖြစ်သူနဲ့အတူဂျပန်မှာ၁၀နှစ်နေခဲ့တဲ့မုဝမ်ချင်း( Zhang Jing Yi)ဟာ အမေဆုံးသွားပြီးနောက်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးအဖေဆီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အစ်ကိုဖြစ်သူသေဆုံးမှုနဲ့ မိဘတွေကွဲကြတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုစုံစမ်းဖို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရှန်ဟိုင်းစစ်တပ်တွင်းမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထန်ရွမ်လင် ( Chen Xing Xu) ဟာနိမ့်ကျတဲ့မျိုးရိုးကြောင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့ကာကွယ်ရေးအရာရှိဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့်လူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုမရရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ (ကောင်လေးသနားပါတယ်)။ရွီကွမ်းရောက် ( Evan Lin) ဟာ တပ်မှုးယွဲ့ချန်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအများလေးစားအားကျခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်သူကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာပါဝါပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမနှစ်သက်ပါဘူး။ကံကြမ္မာရေစက်ကြောင့် သူတို့လူငယ်သုံးယောက်ဟာသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်။မုဝမ်ချင်းကမုမိသားစုအခြေခိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွီကွမ်းရောက်ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်။ထန်ရွမ်လင်ကအရင်ကမုမိသားစုအမှုကိုစုံစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မုဝမ်ချင်းကိုပူးပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ရည်ရွယ်ချက်မတူကြတဲ့သူတို့၃ယောက်ဟာအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသံယောဇဉ်တွေချည်နှောင်မိလာကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်ပါတီထဲဝင်ပြီး နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတာကိုနားလည်လာကြတယ်။နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေကြားကသူတို့ရဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော် Quality : WEB-DL 720pFormat : mp4Total Episodes : 36During : 45Original Network : YoukuAired On : Monday, Tuesday, Wednesday, ...
Fall In Love ( 2021 )
Show Window: Queen’s House Show Window : The Queen's House (2021)ဟန်ဆောဂျူ နဲ့ ဟန်ဂျောင်းဝန် တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက လိုလေသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း ဟန်ဆောဂျူဟာ အိမ်ထောင်ရှင်မတိုင်းအားကျရတဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ခင်ပွန်းအပြင် ချစ်စဖွယ်သားသမီးလေးတွေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ ဟန်ဆောဂျူရဲ့ ဘဝနန်းတော်ကြီးဟာ တစ်နေ့မှာတော့ပြိုလဲဖို့အတွက် အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်။ ဟန်ဆောဂျူနဲ့ အိမ်ထောင်မကျမီကအလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခဲ့တဲ့ ရှင်းမြောင်ဆော့ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့‌Lahen လုပ်ငန်းစုကြီးမှာ ရာထူးကြီးနေရာကို ရရှိထားခဲ့ပါပြီ။ သစ္စာရှိခင်ပွန်းတစ်ယောက်အဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရှင်းမြောင်ဆော့ဟာ ယွန်းမီရာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာ ခံစားချက်တွေကို သိက္ခာနဲ့မဖုံးဖိနိုင်တော့ဘဲ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ မချိုးဖောက်သင့်တဲ့စည်းကို ချိုးဖောက်မိသွားပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Heavy Drama ကြိုက်သူများအတွက်တော့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာလည်းThe World Of The Married, Love (ft. Marriage and Divorce) စတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရိုက်ကူးပြခဲ့တဲ့ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်လာတဲ့ ဒရမ်မာစံနှုန်းကို ...
Trace of Hidden Love(2021) Trace of Hidden Love (2021) ________________________ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်းထိရန်ထဝပ် ရဲ့အကို ထယူးထဝပ်ဟာ ကေအုဆာနှင့် လက်ထပ်ပြီး၁ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ အိမ်တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်ကေအုဆာ သည် ထူးထူးခြားခြား ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အတိတ်မေ့နေသောလူတစ်ယောက်အဖြစ် ဆေးရုံတွင် ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီလူသတ်မှူမှာ သံသယဖြစ်စရာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ကေအုဆာ ဟာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို ထိရန်ထဝပ် နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါတော့တယ်သိုသော်၊ အဖြေများကိုရှာဖွေရင်း သူမ၏အမှတ်တရများကို ပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ရှာဖွေနေစဉ်တွင်...ထိရန်ထဝပ်နှင့် ကေအုဆာ အကြား အချစ်ဇာတ်လမ်းသည် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အမှုကိစ္စအမှန်တရားကို သူတိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မလား.?သူတိုရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲ...................ကေအုဆာရဲ့ အမွှာ အမကိုရော ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိမလဲ...........လူသတ်မှု၏ ပဟေဠိကို အဖြေရှာနေသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖုံးကွယ်ထားသော ဒရာမာ ဇာတ်ကားကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီEpisodes: TBAAired: Nov 23, 2021 – TBAAired On: Mon & TueGenres: RomanceTranslated by ...
Trace of Hidden Love(2021)
The King’s Affection (2021) The King’s Affection (2021)ဒီတစ်ခါမှာတော့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နန်းတွင်းကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားရဲ့ မိဖုရားဟာ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ပြီး မင်းသားရယ် မင်းသမီးရယ် အမွှာလေး ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် မင်းသားဖြစ်ရမယ့်သူက မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ဝမ်းတည်းထွက်ခဲ့တာကြောင့် မကောင်းတဲ့နိမိတ်လို့ ယူဆကြပြီး မင်းသမီးငယ်လေးကို သတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီလိုကနေ တော်ဝင်သမားတော်ကြီးနဲ့ အိမ်ရှေ့စံမိဖုရားတို့က မင်းသမီးငယ်လေးကို သေတဲ့ပုံစံလုပ်ပြီး ​တောတွင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ စွန့်ပစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ အချိန်ကာလတစ်ခု ကြာမြင့်လာတဲ့အခါ မင်းသမီးငယ်လေးက မိဖုရားကြီးရှေ့ ပြန်ပေါ်လာချိန်မှာတော့..... နန်းတွင်းရေးအရှုပ်တွေကြားကနေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူငယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ဖော်ကျူးရိုက်ပြထားပါတယ်She would never know နဲ့ လူသိများခဲ့တဲ့ မင်းသားလေး Rowoon ပါဝင်တဲ့ Cast ချောချောလေးတွေ များစွာပါဝင်တဲ့ နန်းတွင်းကား ချောချောကောင်းကောင်းလေးပါ အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ Channel Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ ​စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်အညွှန်းကိုတော့ Amelia က ရေးသားပေးထားပြီးတော့ဘာသာပြန်တွေကတော့ Jerrica, Shwe Pyae, Amelia, Thet Hnin Hsu တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။Encoder - AugustSize: 500MB Quality: 720p Subtitle: ...
IDOL: The Coup ( 2021 ) ဇာတ်လမ်းအညွှန်းdisband အဖြစ်မခံရဖို ရေကုန်ရေခန်းကြိုးစားနေကြတဲ့ "doomed Idols" လို့တင်စားခေါ်တဲ့ idol တွေရဲ့ဘဝကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရှုးနိမ့်မှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး ပန်းတိုင်အသစ်ဆီကို တစ်လှမ်းချင်း သတ္တိရှိရှိယုံကြည်ချက်ရှိရှိ လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ စိတ်ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်Kim Je Na ကတော့ ၆ နှစ်သက်တမ်းရှိ Cotton Candy အဖွဲရဲ့မန်ဘာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်Cha Jin Hyuk ကတော့ Cotton Candy အဖွဲကို စီမံနေတဲ့ အင်တာတိန်းမန့်ရဲ့ စီအီးအိုပေါ့Seo Ji Han ကတော့ Mas လိုခေါ်တဲ့ နာမည်ကြီး အိုင်ဒေါအဖွဲရဲ့ မန်ဘာတစ်ဦးဖြစ်သလိုCotton Candy နဲ့ အေဂျင်စီတစ်ခုတည်းလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်နှစ်အကြာကြီးဖွဲစည်းထားတဲ့ Cotton Candy ဆိုတဲ့အဖွဲလေးဟာ disband မဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တစ်ကြိမ်လေးပဲ အောင်မြင်ဖို လက်တစ်ကမ်းသာလိုတော့တဲ့အခါidol ဖြစ်ရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး အခက်အခဲတွေ သွေးချွေးမျက်ရည်တွေ အများကြီးရင်းပြီးမှရလာရတာပါ ဒီလိုနေရာကိုရပြီးရင် ...
IDOL: The Coup ( 2021 )
The Outlaws S01 (2021) The Outlaws Season 1 (2021) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း******************************************************* အပိုင်း (၁ မှ ၆) အစ/အဆုံး ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မသိကျွမ်းဖူးတဲ့အပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တွေပါ မတူညီကြတဲ့ သူစိမ်း ခုနစ်ယောက် မိမိတို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် လူမှုကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့အတွက် ဘရစ်စတိုးမြို့မှာ ရှိတဲ့ မြို့ပြအသင်းတိုက်မှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးမှ အချင်းချင်း ရင်းနှီးလာကြပါတယ် ကံကောင်းချင်တော့ သူတို့ဟာ ငွေသားတွေအပြည့်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပြီး ဝေစုခွဲယူကြဖို့ စီစဉ်ထားကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့မသိတာက ဒီငွေထုပ်ကြီးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဒုစရိုက်သမားတချို့ကလည်း အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာပါပဲ အပိုင်း ၆ ပိုင်း ပါတဲ့ Season 1 ကို BBC က ထုတ်လွှင့်ပြသားထားပြီး BBC One နဲ့ Amazon Studios တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုဖြစ်တဲ့အပြင် ဇာတ်အိမ်လည်း ခိုင်တာကြောင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုရမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းလေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် Aired: 25 October 2021 -- Aired ...
The Outlaws S01 (2021)
Supergirl Season (5) Supergirl Season (5)================Season 5အစမှာတော့Catcoမီဒီယာကို အမြင်သစ်တွေရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဆီလွှဲပြောင်းပေးလိုက်လို့Karaရဲ့ဂျာနယ်လစ်ဘဝကတော့ လှုပ်ရှားရမယ့်အခြေအနေပါ။Lex Luthorမသေခင် Lenaကို Supergirlဘယ်သူလည်းဆိုတာပြောခဲ့လို့Lenaတစ်ယောက် သူသစ္စာဖောက်ခံရသလိုခံစားရပြီးKaraကိုလည်း သူနာကျင်သလိုမျိုး နာကျင်သွားအောင်လုပ်ဖို့ plan‌တွေချနေပါတယ်။J'onn ဆီကိုလည်း မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ အသေးစိတ်ကတော့ စီးရီးလေးကိုပဲ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ။(ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူများကတော့ CM Team မှဖြစ်ပါတယ်။) File Size - (650 MB) Quality – WEBDL 1080p Duration - 40 mins (@Episode) Subtitle – Myanmar Hardsub Format – MP4 Genre : Action, Adventure, Drama, Fantasy Translator – CM Team Encoder – SWM Zip Episode (01 ~ 11) - VIP / Yoteshin / Megaup / Userdrive / Yandex 720P ...
TMDb: 5.9/10 1039 votes
Supergirl Season (5)
Rainless Love inaGodless Land ( 2021 ) ထိုင်ဝမ်ရဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Joanne Tseng ,Fu meng bo,Joe Cheng, Alice Ke,Yan Yu Lin တိုအဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့မိုးနတ်မင်းနဲ့ လူ့ပြည်ကမိန်းကလေးတိုရဲ့အချစ်ကားကောင်းလေးပါကမ္ဘာကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ဆီးလာခြင်းနဲ့အတူ နတ်မင်းတွေဟာသူတိုကဲ့ဆုတောင်းတွေကိုရုတ်သိမ်းဖိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာ မြေဆီ နောက်ဆုံးမိုးရေမကျခင်မှာနတ်မင်းတွေအားလုံးထွက်ခွာကြမှာပါ..နတ်မင်းတွေအားလုံးရဲ့ထွက်ခွာမှုကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတဲ့အခါ..တစ်ချိန်ထဲမှာပဲမိုးနတ်မင်းဖြစ်တဲ့Oradနဲ့ ရှဲထျိန်းတိတိုရဲ့အချစ်ဟာလဲ နတ်မင်းတွေရဲ့ထွက်ခွာဖိုစီစဥ်ခြင်းနဲ့အတူ အချစ်ရေးအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်နောက်ပြန်ရေတွက်ရချိန်ဖြစ်လာပါတယ်..ကမ္ဘာ ကြီးဘယ်ဆီဦးတည်မှန်းမသိရှိရချိန်ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကသူမနဲ့စောင့် ရှောက်ရေးနတ်မင်း(မိုးနတ်မင်း)ကြား ဆက်နွယ်နေတာသိလိုက်ရတဲ့အခါ....ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဆန့်ကျင်လိုမရတဲ့စီစဉ်ထားမှု...လွန်ဆန်လိုမရတဲ့နှလုံးသား..ဆုတောင်းပေးမှုနဲ့ကျိန်စာတိုက်မှု ဘယ်အရာကအရင်ရောက်လာမှာလဲဆိုတာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပါ Quality : WEB-DL 720pFormat : mp4Total Episodes : 13Genres : Fiction , DramaSubtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub )Translated By CCF TeamEncoded By LK Episode 1 ( Part 1 ) Yoteshin / CMDrive / Usersdrive / Meganz / VIPEpisode ...
Rainless Love inaGodless Land ( 2021 )
Little Mom (2021) Little Mom၁၆ နှစ်အရွယ်မိခင်မိန်းမသားတစ်ယောက်အတွက် မိခင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တဲ့အရာပါ။အိမ်ထောင်ကျပြီးသား အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတောင်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊မီးဖွားချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အပြောင်းအလဲတွေက ပြောပြမရနိုင်လောက်အောင် အလီလီပါပဲ။ရည်မှန်းချက်တွေ အိပ်မက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့၊ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန် ဖြစ်လာချင်တဲ့၁၆ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်၊ သစ်ရွက်လှုပ်တောင် ရယ်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ ချစ်သူထားရင်းမထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာကြောင့် အိပ်မက်တွေ အနာဂတ်တွေ အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး တစ်ခါမှ မတွေးဖူးတဲ့ ဘဝသစ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တာကြောင့် အချစ်တွေဟာ မသေချာသေးသလို ဘဝအတွက်လည်း အသင့်မဖြစ်ကြသေးပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်မလေးလိုအပ်တိုင်း အမြဲရောက်လာပေးတတ်တဲ့ ကျောင်းရဲ့ဂျစ်တူးလေးတစ်ယောက်ကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းကို တစ်ဖက်သတ် သဘောကျနေတဲ့ ကောင်မလေးကကျောင်းမှာ မင်းသမီးနဲ့ ပြိုင်ဖက် ဖြစ်နေပြန်ပါရော။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့လေးယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းရယ်မထင်မှတ်ဘဲရလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရယ်ကို မင်းသမီးတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ၊နောက်ဆုံးမှာရော ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးနဲ့ အဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုတာကို ခံစားကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Little Mom series လေးဟာ ကေဒရမ်မာ ...
Teluk Alaska (2021) ကျောင်းတွင်းအရိုဇာတ်လမ်းလေးတွေမှကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက်အချောအလှတွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးကြည့်ရမယ့်အင်ဒို မီနီစီးရီးသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တည်းက အမြဲတတွဲတွဲဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကစားဖော်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ..တစ်ရက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးကအဝေးကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဝေးကွာသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကုန်လွန်ခဲ့တာ နေရပ်မှာပဲကျန်နေခဲ့တဲ့Ana တောင် အထက်တန်းကျောင်းသူအရွယ်ရောက်နေပါပြီ။တစ်နေ့တော့ Anaတို့ကျောင်းကိုကျောင်းသားသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းလာပြီးအဲဒီကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကလည်းတစ်ချိန်က Ana ရဲ့ Alister နဲ့တူနေတဲ့အခါ ..တကယ်ပဲ တစ်ချိန်က Alister ဖြစ်နေမလား ..နာမည်တူမရှား လူတူမရှားဆိုသလိုပဲဖြစ်နေမလား ..အထက်တန်းရောက်မှဆုံတဲ့ဖူးစာပေပဲလားဆိုတော့ဆက်လက်ပဲရှုစားလိုက်ပါတော့နော်။ File size…( 300 MB) Quality…. Web-Dl 1080P Format… MP4 Duration…. 30 Min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder…. Thit San Khant Translated by... JimX ~ Lai Laii ~ Tar Tee Poe Download List=========== VIP Link EP 01 - YoteShin / CM Drive / Usersdrive / Megaup EP 02 - YoteShin / CM Drive ...
TMDb: 9.1/10 58954 votes